कसरी ल्याउन सकिन्छ जीवनमा शान्ति ? - Sunaulo Nepal
कसरी ल्याउन सकिन्छ जीवनमा शान्ति ?
मंसिर १, २०७८ बुधवार ०६:५० बजे
विचार जसलाई ‘थट’ पनि भनिन्छ, ‘थट प्रोसेस’ भनेको माइन्ड हो। नेगेटिभ थट प्रोसेस हुनेबित्तिकै ब्रेनलाई नेगेटिभ वेभ दिने भयो, साइन्सले बिटा, अल्फा, थिटा र गामा वेभको बारेमा बोलिसकेको छ। ब्रेनमा एमआरआइ गर्दा, सिटी स्क्यान गर्दा कस्तो वेभ आउँछरु यसको रेन्जले कस्तो प्रभाव गरिरहेको छरु यसलाई हेर्न सकिन्छ। सामान्य एक्सरे गर्दा नै शरीरभित्रको धेरै कुराहरु अब्जर्भ गर्न सकिने अवस्थामा छौं हामी।
यो यति विशाल छ कि जति चर्चा गरे पनि जति शब्दमा ल्याए पनि कहिल्यै सकिँदैन, यसको अन्त्य छैन। यो कुरालाई हामीले अलि सामान्यीकरण गरेर मानिसलाई जन्म के हो, जीवन के हो, मृत्यु के हो, जीवन र जगतसँगको हाम्रो प्राकृतिक नियम के होरु प्राकृतिक नियमभन्दा बाहिर गएर हामीले आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्सको जुन कुराहरु हामीले गरिरहेका छौं, आज हामीले साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको कुराहरु गरिरहेका छौं, हाइपरसोनिक बमहरुको कुरा गरिरहेका छौं, अनम्यान ड्रोन र प्लेनका कुराहरु गरिरहेका छौं, मार्समा बस्ती बसाउने कुराहरु गरिरहेका छौं।
अति गज्जबको कुरा आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स र साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा हामी गरिरहेका छौं। आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्सलाई रकेट साइन्स र बायो साइन्सले सपोर्ट गरिरहेको छ। आर्टिफिसियल इन्टिलिजिेन्सलाई नर्मल तरिकाले प्रयोग गरिरहेका छौं, यो त ठिकै छ। ज्ब साइन्स रकेट साइन्स र बायो साइन्स भएर जब आउँछ नि हामी कहाँ पुग्दैछौंरु
हामीले थट प्रोसेसलाई सही तरिकाले नबुझ्दा खेरि संसारका अधिकांश समस्या निम्तिएका हुन्। एटम बम त रबर्ट जे ओपनआइमरको एउटा थट हो, अल्बर्ट आइन्सटाइनको थट हो, एटम बम कसरी बनाउनेरु युरेनियम, प्लुटुनियमलाई कसरी प्रोसेसिङ गर्ने रु त्यसलाई कसरी बमको रुपमा रुपान्तरण गर्नेरु यो त पहिले आइडिया हो नि, थट हो नि१
आइडिया र थटले हामीले जुन संसार हामीले निर्माण गरिरहेका छौं, आइफल टावर बनाउने त आइडिया हो नि१ त्यसले गर्दा हामीले यो थट अनि माइन्डको प्रोसेसलाई जबसम्म कन्ससनेस र मौनताबाट सञ्चालन गर्न सक्दैनौं, तबसम्म विचार हाम्रो शत्रु बन्छ। विचारलाई मानिसले जबसम्म मित्र बनाउन सक्दैन, तबसमम्म मानसिक, इमोसनल र ग्लोबल रुपमै समस्या आउँछ।
# जीवनमा शान्ति
दार्चुलामा बालविवाह रोक्न मतदान
छुवाछूतरहित छठ : सांस्कृतिक एकताको महान पर्व
ओलीको दम्भसँगै सत्तामा हिरोबाट जिरो एमाले